VaMugabe Vanosarudzwa Kuti Vamirire Zanu PF Musarudzo Dzegore Rinouya
Zvita 13, 2007
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vadomwa manheru eChina kuve mukuru webato achamirira Zanu PF musarudzo dzegore rinouya. Zvinonzi vatsigiri veZanu PF vanodarika zviuru gumi, vari pamasangano uyu, weExtra Ordinary Congress.
Vachitaura pamusangano uyu, VaMugabe vati sarudzo dzegore rinouya dzinofanirwa kuitwa muna Kurume, vakapikisisa kuti izvi zvinofanirwa kuitwa. VaMugabe vati kana paine mapato ezvematongerwo enyika asati agadzirira sarudzo idzi, imhosva yavo, sezvo vari kuziva kuti sarudzo idzi dziri kuitwa muna Kurume.
Zvinonzi VaMugabe vataura kwemaawa anodarika maviri, vakatora mukana uyu kutuka nyika dzakaita seBritain neAmerica. VaEarnest Mudzengi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari National Director weNational Constitutional Ammendment.
Patience Rusere weStudio 7 abvunza VaMudzengi kuti seyi VaMugabe vari kuda kuti sarudzo dziitwe muna Kurume, uku MDC ichiti sarudzo idzi dziitwe muna Chikumi.
Tichiri panyaya yeExtra Ordinary Congress yeZanu PF, neChitatu VaMugabe vakayambira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu kuti vasiyane nekatsika aka, vachiti izvi zvinoremedza veruzhinji.
Vachitaura kumusangano weCentral Committee yebato ravo muHarare, VaMugabe vakati zvinosiririsa kuti vazhinji vemabhizimusi vari kukwidza mitengo ava, vanhu vakabatsirwa nehurumende kumisa mabhizimusi aya, kuburikidza nechirongwa chekupa hupfumi kuvatema.
Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Marah Hativagone, vaudza Studio 7 kuti dambudziko harisi kukonzerwa nevemabhizimusi, asi kuti mitemo yakatarwa nehurumende iyo iri kuomesera vemabhizimusi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti VaMugabe vava kurumwa nechekuchera, sezvo vari ivo vakapa upfumi kune vava kukwidza mitengo yezvinhu ava.